मंसिर १ देखि ई-पासपोर्ट, के छन् विशेषता ? – List Khabar
Home / समाचार / मंसिर १ देखि ई-पासपोर्ट, के छन् विशेषता ?
admin November 12, 2021 समाचार Leaveacomment 207 Views
November 12, 202139
२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मंसिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) जारी गर्न शुरु गर्दैछ । राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वरथित विभागको नयाँ भवनमा ई-पासपोर्ट छपाइको तयारीको लागि अन्तम चरणका परीक्षणहरु गरिररहेको छ ।
Previous अञ्जली अधिकारी किन वि’वादमा आइरहन्छिन् ? किन आजकल प्रकाश सपुतको गीतमा देखिन्नन् रुँ’दै सुनाइन् आफ्नो पी’डा (भिडियो हेर्नुस्)
Next कट्रिनासंग विवाहको तयारी थालेका विक्की कौशलको पूर्व प्रेमिकाले दिइन् यस्तो प्रतिकृया